Indlela yokulungisa iiNkundla kwiGalofu yeGalofu
Dlala i-Shot yakho
ULaura Diaz uthumela i-divot indiza ngexesha lomcimbi weLPGA Tour. A. Messerschmidt / Getty Izithombe
Uninzi lweempuphu ezintle kwiibhentshi zetsimbi ezibethe kakuhle zivelisa i- divot kwi- fairway . Igama elithi "divot" libhekiselele kwizinto ezimbini ezihlukeneyo: uluhlu oluphezulu lwe-turf olucatshulwayo kwaye luthunyelwa ngeenqwelo ezindizayo njengoko isinyithi sakho singena emhlabathini; kunye nesiqhamo esibangelwayo, okanye isiqwenga somhlaba ongenalutho, esishiywe kwi-fairway.
Ukuba ukhangele ngokukhawuleza, kwisithombe esingentla, ukuya kwesobunxele uye phambili kwegolide ungabona inxalenye ye-divot indiza.
Ukulungisa ii-divots ngumsebenzi obalulekileyo wegolfu owenzayo. Ngokutsho kweQumrhu le-Golf Course Superintendents Association of America, i-divot elungisiweyo inokukhawulezisa inkqubo yokuphulukisa (intsingiselo: ingca iya kugubungela ubunqamle kwi-fairway) ngeveki ezimbalwa, ngokuchasene ne-divot engapheliyo.
Khangela i-Divot yakho
Yep, yi-divot konke okulungileyo. Isitye se-golfer sicele ugcino oluphezulu lwe-turfgrass, ukubonisa i-sod ngaphantsi. (Oku kwenzeka ngenxa yokuba iinconsi zenzelwe ukubetha ibhola endleleni ehlayo, oku kuthetha ukuba baqhubeka behla baya emhlabathini emva kokuqhagamshelana nebhola. Funda iinqununu " Ngeentsimbi, hlala phantsi ukwenza ibhola likhuphuke " malunga inkcazo yale ngcamango.)
Khetha indlela efanelekileyo
Ngoku ukuba uthathe i-divot, yiyiphi indlela efanelekileyo yokusebenza? Kukho iindlela ezimbini zokulungisa, okanye "ukulungisa," i-divots. Omnye ukuzalisa i-divot ngesanti okanye umxube-nbewu-imbewu; enye yinto yokufumana i-turfgrass / sod patch eyayihlulwa kwaye ibuyiselwe endaweni.
Uyazi njani ukuba yiyiphi indlela efanelekileyo yokusebenza apho udlala? Khangela inqwelo yegalufu . Ukuba ikhosi ifuna ukuba usebenzise isanti, baya kukunika yona. Isanti (okanye umxube wesihlabathi kunye nembewu) iya kuba kwinqanawa ehleli kwinto ekhangeleka njengomkhumbi omkhulu. Ngokuqhelekileyo umgcini wendebe unamathele kwisakhelo esibambe uphahla lwenqwelo.
Ukuba ubona le ngxowa yesanti kwinqwelo, igumbi legalufu likuxelela ukuba usebenzise isanti. Ukuba awuboni, ke uya kufaka i-turf endaweni (esiza kubona amaphepha ambalwa phambili). Kwinqwelo engentla, sibona ukuba isanti inikwe, ngoko ...
Xa usebenzisa iSanx okanye iSand / iMbewu Mix, uthele kwi-Divot
Thatha ingxowa yentlabathi uze uthele isanti, okanye umxube / umxube wembewu, kwi-divot. Thelela okwaneleyo ukugcwalisa i-divot.
I-Smooth Over Sand to Level Out Divot
Omnye uzalise i-divot, sebenzisa unyawo lwakho ukuba uguqulule kwaye unqande isanti. Kwaye uyenziwe! Into enjalo into elula ukuyenza, kodwa inceda ikhondo legalufa liphilise.
Kodwa kuthekani ukuba akukho santi esinikwe kwinqwelo yegalufu? Kwimeko apho, uya kwenza into encinane.
Akukho Sandla okanye iSand / iMbewu Imxube ibonisa ukutshintsha i-Turf eViweyo
Xa kungenasanti, unokufumana i-turf elalicatshulwa ngaphandle kwe-fairway. Ukuba uthe wathatha "i-divot ecocekileyo," uya kufumana i-turf ehlala kwenye, into ecocekileyo. Kodwa ngamanye amaxesha, i-turf iya kuba ziinqununu. Yilanda nje ngokusemandleni akho, uze uyifake endaweni. Ukuba i-divot yakho inxalenye enye, yifanele uyibuyisele emhlabathini ngendlela efanayo ngayo (njengokuba ungayenza iphazili). Ukuba iindawo ezininzi, yenza umsebenzi ongcono kakhulu ongayenza ukuba ulungele ngokufanelekileyo endaweni.
I-Tamp Down ibuyisela kwakhona iTurf Ukugqiba ukuCoca
Xa i-turf ibuyele emhlabathini, unqamle ngeenyawo zakho, kwaye uyenziwe.
Ukulungisa ii-divots akusoloko kuyimfuneko; kunye neentlobo ezithile ze-turfgrasses, ngamaxesha athile alo nyaka, ukulungiswa kwe-divot akuyi kwenza nayiphi na into eyahlukileyo, emihle okanye embi, kwimpilo yegolfu. Kodwa ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba yintoni apho udlala khona, kwaye xa udlala, kufuneka uhlale ulungisa ii-divots yakho kwiklasi yegalufa.
Ukuchaza iShekra esesabekayo eGoli
I-Rough Primary kwi-Golf Courses
Inceda Ukucinga 'ngoFescue' kwiGosa leGalofu njengesiXeko esiBini '
Ngaba kukho ukungafani phakathi kwamaRubber eTeetball eTransitive?
Ingozi yamanzi kwiGalofu
Yonke Into Ofuna Ukuyifumana NgeTable Table / Ping-Pong kwimidlalo yeOlimpiki
Ibhola leSoka 101: Izixhobo ezisisiseko
Abanqobi beMidlo yeHlaki yeHlaki ye-Olimpiki
Iiklasi ezikhethekileyo kwiVB.NET
Ukwahlukana kweFeldspar, iimpawu kunye nokuchonga
Iimfazwe eziMnandi kunye eziMbi kakhulu zeMfazwe malunga ne-Afghanistan
Uqwalasele ngokugqithiseleyo iNtension Voltage
Indlela yokwenza Uninzi kakhulu kuMkhosi weMculo
Ukwahlukana phakathi ko- 'Sethulo' kunye ne 'Presentar'
Hlola iiVolcano ezinkulu kakhulu
Isibhengezo sendawo (indawo echasayo)